महिलामा कतिबेला यौन चाहना अधिक हुन्छ?के भन्छ अमेरिकी अध्ययन ?
महिला के चाहन्छन् ? शताब्दियौदेखी यो प्रश्न आम मानिसदेखि मनोवैज्ञानिक र वैज्ञानिकसम्मलाई सताइरहेको छ । सिगमन्ड फ्रायडजस्ता महान मनोवैज्ञानिक हुन् वा हलिउड अभिनेता मेल गिब्सन सबै यो प्रश्नबाट तनावमा छन् । यो पाटोबा बारेमा हजारौ पुस्तक, लेख, ब्लग पोस्ट लेखिइसकेको छ । लाखौपटक यो विषयमा बहस भइसकेको छ। पुरुष नै किन, स्वयम महिलाहरुले पनि यो विषयमा अक्सर चर्चा गरिरहेको पाइन्छ । तर, यो विषयमा लामो चर्चा, हजारौ पुस्तक, वर्षौको अध्ययनका बावजुद महिलाको इच्छाको कुनै परिभाषा, कुनै एउटा दायरासम्म तय हुन सकेको छैन ।
न त आखिर महिलाभित्र कस्तो इच्छा जागरुक हुने गर्दछ भन्ने नै तय हुन सकेको छ रु कि उनीहरुलाई कसरी सन्तुष्ट गर्न सकिन्छ रु यद्यपि वर्षौको मेहनत बर्बाद भएको छ, यसो पनि होइन । अहिले हामी निकै हदसम्म महिलाहरुको यौनसम्बन्धी इच्छा बुझ्न सक्दछौ । महिलाहरुको कामेच्छाका बारेमा पहिलाको परम्परागत सोचबाट बाहिर आइरहेका छौ । पहिला भन्ने गरिन्थ्यो कि महिलाहरुको चाहना कहिल्यै पूरा गर्न सकिँदैन । उनीहरुको सेक्सको भोक मेटाउन सकिँदैन । उनीहरुमा बजरजस्त कामवासना हुने गर्दछ । तर, अब वैज्ञानिकहरु मान्न थालेका छन् कि महिलाहरुको यौन चाहनालाई कुनै एउटा परिभाषाको दायरामा समेट्न सकिँदैन । यो अलग अलग महिलामा अलग अलग हुने गर्दछ ।
तर, अब सबै अध्ययनअरुले स्पष्ट गरिसकेको छ कि केही सामान्य हेरफेरका साथ महिला र पुरुषमा सेक्स चाहना एकै जस्तो हुन्छ । पहिलापहिला यस्तो प्रश्न पनि गरिन्थ्यो कि महिनामा तपाईलाई कतिपटक सेक्सको आवश्यकता महशुस भयो रु जवाफ आउँथ्यो, जसबाट लाग्थ्यो कि पुरुषलाई बढीपटक आवश्यकता महशुस भयो । तर, जब यही प्रश्न घुमाउरो पारामा गरियो कि केही आस अवस्था, साथीसँगको निकटता, कुराकानीका क्रममा तपाईलाई कति पटक सेक्स इच्छा जाग्यो रु तब महिला र पुरुषको जवाफ कमोबेश एक बराबर चाहना जाहेर गर्नेवाला थिए । ब्रिटिश कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्रोफेसर लोरी ब्राटो भन्छिन्–यसबाट हाम्रो त्यो धारण ट्टदछ कि महिलालाई सेक्समा कम रुचि हुन्छ।
उनीहरुको इच्छा अलग प्रकारको हुन्छ । एउटा अर्को कुरा जुन अब उत्तम तरिकाले बुझिँदैछ, त्यो यो हो कि महिलाभित्र सेक्सको चाहना उनीहरुको मासिक धर्मको हिसावले बढ्ने र घट्ने गर्दछ । मासिक धर्म सुरु हुनु केही अघि उनीहरुलाई सेक्सको बढी आवश्यकता महशुस हुने गर्दछ । भर्जिनिया युनिभर्सिटीकी मनोवैज्ञानिक एनिटा क्लेटन भन्छिन्–सेक्स हाम्रो परम्परागत जिम्मेवारी अर्थात सन्तान उन्पादन गर्ने माध्यम हो । त्यसैले जब महिलाहरुभित्र अन्डाणु बन्न लाग्दछ तब उनीहरुलई सेक्सको बढी आवश्यकता महशुस हुने गर्दछ । क्लेटनका अनुसार यो त आजभोलिको चलन हो कि सेक्स र सन्तान जन्मउनु अलग अलग गरिँदैछ । तर, इश्वरीय रुपमा यो दुवै एकै हो । पहिला डाक्टरहरु पनि पुरुषको हर्मोन टेस्टोस्टेरोनले महिलाहरुमा यौन इच्छा जगाउने काम गर्दछ भन्ने मान्दथे । त्यसैले जब महिलाहरु सेक्समा कम रुचीका विषयमा चिकित्सककोमा जाने गर्दथे । चिकित्सकले पनि उनीहरुलाई टेस्टोस्टेरोन लिन उपाय बताउने गर्दथे । यद्यपि धेरै चिकित्सक अहिले पनि यही उपचार पद्धति कम यौनेच्छा महशुस गर्ने महिलाहरुमा अपनाइरहेका छन् । जबकि तमाम अध्ययनहरुपछि महिलाहरुका यौन इच्छासँग टेस्टोस्टेरोनको कुनै सम्बन्ध भन्ने मान्न थालिएको छ। मिशिगन युनिभर्सिटीकी प्रोफेसर सारी वान एन्डर्स भन्छिन्–यौन चाहनाको असरले हर्मोनको बहाव तेज हुन्छ । र, मानिसहरुले त्यसैले उल्टो बुझे । मानिसहरुलाई लाग्छ कि हर्मोनको बढी बहावबाट यौन चाहना उत्पन्न हुन्छ । तर, उनी भन्छिन कि यौन इच्छाको हर्मोनसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन ।
पोर्चुगलमा ३० जनवरीसम्मका लागि संकटकाल थपियो 134 views
गजल – माधव दाहाल ‘निश्चल’ 18 views